Trump oo ku sheegay dilka Khashoggi qarintii abid ugu xumeyd oo lagu qariyo fal dil… – Hagaag.com
Trump oo ku sheegay dilka Khashoggi qarintii abid ugu xumeyd oo lagu qariyo fal dil…
Posted on 24 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay jawaabta Sacuudi Carabiya ay ka bixisay dilka wariye Jamal Khashoggii ay tahay “qarinti abid ugu xumeyd oo lagu qariyo fal dil oo dhacay.”
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxay marar badan dilka Khashoggi iyo waxa ku dhacay ay ka soo saareen warbixinno iska horimanaya. Toddobaadyo waxay ku andacoodeen inuu nool yahay Khashoggi, waxay ugu dambeynti boqortooyadu qiratay wariye Jamal Khashoggi oo 59 jir ah inuu ku dhintay hawlgal naxariis darra ah xilli uu booqanayey qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
“Mareykanka uma dul qaadan doono ayuu yiri dilka arxan darrada ah ee loo geystay wariye Jamal Khashoggi in la qariyo lagana aamuso.”
Waddamada adduunka ugu hodansan ee dhanka warshadaha horay uga maray ayaa ayagana ka dalbaday Sacuudiga inay si buuxda u sheegaan sidii saxafiga Jamaal Khashoggi loogu dhex dilay qunsuliyadda ay boqortooyadu ku leedahay magaalada Istanbul.
Tallaabo ka mid ah culays xoog leh oo beesha caalamka ka imaanaya ayaa hadal ay soo saareen dalalka la isku yiraahdo G7 waxay Sacuudiga weydiisteen inuu sharraxaad ka bixiyo geerida Khashoggi, taasoo keentay su’aalo badan oo aan weli jawaab loo hayn.